Tax Planning for Growth and Sustainability ဟောပြောပွဲ - YOYARLAY Digital Media and News
Tax Planning for Growth and Sustainability ဟောပြောပွဲ
Published: February 17, 20202:44 pm Updated: 2:50 pm
စီးပွား​ရေးစလုပ်တဲ့ Start-Up ​တွေက စလို့ IPO (Initial Public Offering) လုပ်တဲ့ Company ကြီး​တွေထိ ​သေ​သေချာချာ လုပ်​ဆောင်ရမှာက Effective Tax Planning ပါပဲ။
အရှိန်အဟုန်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်​ပြောင်းလဲ​နေတဲ့ နည်းပညာ​ခေတ်ကြီးနဲ့ လိုက်​လျောညီ​ထွေရှိ​အောင် မိမိတို့ရဲ့ ​Business Strategy ​တွေ မြန်မြန်​ပြောင်းလဲရ​သလို Tax Strategy ​တွေကိုလဲ ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။
Tax Authorities ​တွေဟာ Taxpayer အခွန်ထမ်း​တွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်​တွေကို Electronically, Online မှ တဆင့် အချိန်နှင့်တ​ပြေးညီ သိ​နေရပြီး ကမ္ဘာအနှံမှာရှိတဲ့ တခြား Tax Authorities များနဲ့ ​​ဝေမျှ နိုင်​နေပါပြီ။
ယခု “Tax Planning for Growth and Sustainability ” ခေါင်းစဉ်မှာ​တော့ TAX PLANNING ဟာ ဘယ်​​လောက် အ​ရေးပါသလဲဆိုတာဘယ်လို ​ကောင်း​ကောင်း ကြိုတင်စီမံရမလဲဆိုတာ (စီးပွား​ရေးလုပ်တတ်ရုံနဲ့ မပြီး​သေးဘူး​လေ၊ ရှာထားတာ​တွေကို ​ကောင်း​ကောင်းစီမံပြီး ဥပ​ဒေကို လိုက်နာလျက် အမြတ်​ကောင်း​ကောင်း ထွက်ဖို့၊ လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်) ကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး လက်​တွေ့ Case များနဲ့ ​လေ့လာ မှတ်ယူနိုင်မှာပါ။
1. Online – https://tinyurl.com/ukpgmwt
2. Phone – 09266559322,09266559323
Executive Member: Free
Associate Member: 10,000 Ks
Regional Member: 20,000 Ks
Non Member: 30,000 Ks
Date : 28. 2. 2020
Time : 9:00 am -12:00 pm
Location :Yoma bank , Level 5, Bago Room, Office Tower 2, HAGL, Myanmar Centre Tower
Previous Previous post: ရာသီလာချိန်ကို ရက်အနည်းငယ်ရွှေ့ဖို့အတွက် သောက်တဲ့ဆေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ
Next Next post: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုစုံတွဲ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မိုတယ်တစ်ခုမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Bupyeong မြို့ရှိ မိုတယ်အခန်းတစ်ခုအတွင်း မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးကို သေဆုံးလျက် တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံး၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်ကို အသက်(၃၂) နှစ်ကို ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက် ည (၁၁) နာရီခွဲခန့်က မိုတယ်တစ်ခုအတွင်း…
Published: August 6, 202010:22 am Updated: 10:23 am
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အရှိဆုံးနှင့် တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ်များ စာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၅ နေရာမှာ Samsung ရပ်တည်
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsungက Boston Consulting Group (BCG) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အရှိဆုံး ကုမ္ပဏီများ စာရင်းနှင့် Brand Finance မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်…
Published: June 30, 202011:47 am
ကိုယ့် ချွေးနဲစာလေးတွေ သဲထဲရေသွန်မဖြစ်ရလေအောင် Facebook ကို အသုံးချနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သတိထားကြမယ်
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခု မှန်ရဲ့လား၊ လူသိများလား၊ ယုံကြည်ရလားဆိုတာ Like နဲ့ Share အရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အရေးကြီးတဲ့ အကောင့်တစ်ခုခု အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ပေးမယ်၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လူတွေ သတိထားမိအောင်…
Published: May 25, 20205:27 pm